Vietnam: Bilaogera voasambotra noho ny fitsikerana an’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2019 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, English
Araka ny filazan'ny Reporters Sans Frontières
“Nisambotra bilaogera iray hafa, Nguyen Ngoc Nhu Quynh, izay manaraka an'i Bui Thanh Hieu (bilaogera iray nosamborina tamin'ny 27 Aogositra), Pham Doan Trang (28 aogositra), Nguyen Tien Trung (Jolay) sy Dien Cay (Avrily 2008) ny manampahefana Vietnamiana. Nosamborina izy tamin'ny misasakalina tamin'ny 1 Septambra noho ny fiampangàna azy ho manitsakitsaka ny lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena sy “manohintohina ny tombontsoam-panjakana.” “
Nitsikera an'i Shina tao amin'ny bilaoginy i Quynh, izay mibilaogy eo ambanin'ny anarana hoe “Me Nam”. Niantso ny governemantany izy mba hanakana ny tetikasa fitrandrahana bauxite izay tarihin'ny orinasa Shinoa amin'ny ampahany betsaka ary naneho hevitra ihany koa momba ny fifandirana eo amin'i Vietnam sy i Shina mikasika ny nosy Spratly sy Paracel ao amin'ny ranomasina atsimo ao Shina .Nolavin'i Quynh ny fitakian'i Shina ho fananany ireo faritra ireo.
Nitatitra ny Reuters fa amin'ny fibilaogina manohitra an'i China, mpikambana amin'ny “fanentanana t-shirt” manohitra an'i Shina ihany koa i Quynh.
“Nampiroborobo fanentanana izy ireo mba hanonta sy hizara T-shirts milaza hoe” SOS, tazony ny maitso ary tazomy ny filaminana ao Vietnam ” sy “Atsaharo ny bauxite. Tsy mila an'i Shina. Vietnam no tompon'ny Spratlys sy Paracels “”
Nosamborina ihany koa ilay bilaogera Bui Thanh Hieu izay nandray anjara tamin'ny “fanentanana t-shirt” saingy navotsotra avy eo.
Mandritra izany, nangataka ny famotsorana azy ny renin'i Quynh.
“” Ampio izahay mba hanafaka azy! “hoy i Nguyen Thi Tuyet Lan nilaza tamin'ny AFP tamin'ny resaka an-tariby avy any an-tanàna amorontsiraka atsimon'i Nha Trang, izay nitazonana ny zanany vavy, Nguyen Ngoc Nhu Quynh, 30 taona nanomboka ny alarobia .”